थिमीकी १०१ वर्षिया वृद्धा, जसले भिटामिन र तातो पानी पिएरै जितिन् कोरोनालाई:: Naya Nepal
भक्तपुर, १९ असोज । भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका वडा नं. ६ स्थित पाचो टोल बस्ने १०१ वर्षकी वृद्धाले सहजै कोरोना भाइरस जितेकी छन् । संक्रमण भएको १६ दिनमा नै उनी निको भएकी हुन् ।
गत असोज २ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकी गणेशमाया प्रजापतिले १६ दिनमा नै कोरोना जितेकी हुन् । त्याे पनि घरमै ताताेपानीकाे भरमा । गत शुक्रबार साँझ उनको कोरोना परीक्षणको नतिजा नेगेटिभ आएको उनका छोरा ईन्द्रबहादुर प्रजापतिले बताए ।
कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि गणेशमाया होम आइसोलेसनमा नै बसिन् । उनले संक्रमणका बेला नियमितरुपमा दिनमा दुई चक्की भिटामिन सी बाहेक अन्य औषधी सेवन नगरेको छोरा ईन्द्रबहादुरले बताए । उनका अनुसार गणेशमायाले नियमितरुपमा पौष्टिक खाना र तातो पानी सेवन गर्ने, तातोपानीको बाफ लिने र घरेलु औषधीको रुपमा ल्वाङ, सुकुमेल, अलैंची, बेसार, अदुवा, पिपला, जाइपत्री लगायतको गरम मसलाको तातो पानी नियमित सेवन गरेर सहजै भाइरसमुक्त भएकी हुन् ।
वडाअध्यक्ष समेत रहेका ईन्द्रबहादुर प्रजापतिको कोरोना परीक्षण पोजिटिभ आएपछि परिवारको परीक्षण गर्ने क्रममा आमा गणेशमायामा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । प्रजापतिका अनुसार उहाँकी दिदी र छोरामा पनि संक्रमण देखिएको थियो । प्रजापति मध्यपुर थिमि नगरपालिका वडा नं. ६ का वडाअध्यक्ष हुन् ।
१०१ वर्षीय गणेशमाया प्रजापतिमा कुनै पनि प्रकारको दीर्घरोग नभएको छोरा ईन्द्रबहादुरले जानकारी दिए । ‘उहाँमा कुनै रोग नभए पनि शारिरीक रुपमा केही कमजोर भने हुनुहुन्छ,’ छाेरा ईन्द्रबहादुरले भने, ‘तर उहाँ नियमित भिटामिन ई सेवन गर्नुहुन्छ । एक दिन भिटामिन ई सेवन गरिएन भने कमजोरीले थकान महसुस गर्ने गर्छ ।’
कोरोना संक्रमणका बेला गणेशमायामा कुनै विशेष खालको लक्षण नदेखिएको सामान्य रुघाखोकी तथा छाती दुख्ने लक्षण मात्र देखिएको थियो । परिवारमा वृद्ध आमालाइ मात्र नभई संक्रमित आफू र आफ्ना दिदी तथा छोरामा समेत कुनै विशेषखालको लक्षण नदेखिएको र सबैले नियमितरुपमा वाफ लिने, तातोपानी पिउने र पाैष्टिक खाना सेवन गर्ने गरेरै कोरोना जितेको ईन्द्रबहादुरले बताए ।
काठमाडौँ । अजयकुमार राय पक्राउ पर्नु अघिसम्म प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सहायक सूचक र खरिदारको लिखित परीक्षा चलाउँदै थिए । रायले गत बुधबार पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका–१६ स्थित देव पार्टी प्यालेसको हलमा राखेर २१ परीक्षार्थीलाई परीक्षा लिइरहेको सूचना प्रहरीमा पुग्यो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको टोली त्यहाँ पुग्यो ।
प्रहरी चौकीका इञ्चार्जले उनको कुरा पत्याइदिन्थे । एसपी पन्तका अनुसार चौकीमा इन्चार्जहरुले इन्सपेक्टर भन्ठानेर सलाम मात्र गरिरहे, आधिकारिकता परीक्षण गरेनन् । अनुसन्धानको क्रममा राय प्रहरी चौकी परवानीपुर, इनर्वा, छपकैया, नगवालगायत पुग्थे । प्रहरीसँग नजिक हुनकै लागि रायले त्यहाँ मिजासिलो व्यवहार गर्थे । रायलाई अहिले ठगी मुद्दामा अनुसन्धान थालिएको छ।
बुधबारको परीक्षामा रायले बारा, पर्सा र सर्लाहीका २१ जना परीक्षार्थीलाई सहभागी गराएको एक शिक्षकले बताए । ती शिक्षकका अनुसार प्रश्नपत्रको ढाँचा भने पत्यारलाग्दो थिएन । प्रश्नपत्र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट जारी गरिएको थियो । गार्ड बस्ने शिक्षक पनि रायले चिनेकै व्यक्ति छन् ।
सशस्त्र प्रहरीको इन्सपेक्टरको आवरणमा ११० दिन जेलमा
बर्दीसहित पक्राउ परेका रायले प्रहरीको बर्दी कहाँबाट ल्याए ? प्रहरी संगठनमा चासोको विषय बनेको छ । कामको सिलसिलामा पोशाक च्यातिएको खण्डमा प्रहरी कर्मचारीले जुनसुकै बेलामा पनि पोशाक सिलाउन सक्ने नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) कुवेर कडायतले बताए ।
तर, नेपाल प्रहरीको कर्मचारीले लगाउने पोसाक जो कोहीले सिलाउन नसक्ने कडायतको दावी छ । ‘हाम्रो मापदण्ड अनुसारको पोसाक कसैले पनि सिलाउन सक्दैन,’ प्रवक्ता कडायतले भने । नेपाल प्रहरीको आफ्नै टेलर समेत रहेको कडायतले बताए । ‘नयाँ पोशाक सिलाउन परे आफ्नै टेलरमा गएर सिलाउन सकिन्छ,’ एसएसपी कडायत बताउँछन् ।
कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को महामारीको कारण ०७६ चैत ११ देखि लकडाउन भयो । लकडाउनको बीचमा राय बारा र पर्सामै बस्थे । रायको बारा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–७ चौधरी टोल घर हो । लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएपछि राय आफैले थालेको पुरानो काममा फर्केको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।